Maamulka Gobolka Banaadir oo hakiyay ceymiskii laga qaadi jiray Gaadiidleyda
Iyadoo Shalay Gaadiidleyda gobolka Banaadir ay ku dhawaaqeen shaqo joojin ka dib markii ay sheegeen in laga qaadaayo lacago aad u farabadan oo aysan awoodin ayaa arintaas waxaa ka hadlay maamulka Gobolka Banaadir.
Afhayeenka maamulka Gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo la hadlay Warbaahinta xalay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu joojiyay Ceymiskii Sharci darada ahaa ee laga qaadi jiray gaadiidleyda gobolka Banaadir.
Waxaa uu sheegay in ay tixgalinayaan cabashada ay qabaan gaadiidleyda Muqdisho.
Gaadiidleyda Muqdisho oo shaqo joojin ku dhaqaaqay shalay Waxa ay sheegeen in ay dhib ku qabaan lacago xad dhaaf ah oo laga qaado Gaadiidleyda, taas oo aan waxba loogu qaban, inkastoo lacagaha Maamulka Gobolka Banaadir uu qaado wadooyinka lagu dhiso.
Gaadiidleyda ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in hada ay soo baxday shirkad cusub oo Takaaful la yiraahdo, taas oo si cad Gaadiidleyda uga qaada lacago ay ku sheegeen Ceymis, waxaana ay sheegeen in ay adeegsanayaan Ciidanka Dowladda Federaalka.